Banyere Anyị - Henan Ascend Machinery & Equipment Co., Ltd.
Henan Ascend Machinery & Equipment Co., Ltd. e guzobere na 2005 na ọ dị na mpaghara ọgbara ọhụrụ nke Zhengzhou City, Henan Province. Dị ka a technology chụpụrụ Ngwuputa akụrụngwa ụlọ ọrụ, ọ na-agba mbọ ka R & D, mmepụta, ahịa na mgbe-sales ọrụ nke Ngwuputa igwe na akụrụngwa.
Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ ngwaahịa ndị na-akụ egweri, ihe na-egweri ihe, ihe ndị na-enweta ịnweta ịnweta, ihe na-eme ka ihe na-agbanwe agbanwe na igwe na-egwe ọka. Na mgbakwunye na ahịa ụlọ nke China, igwe Ascend na-agbasa azụmahịa ya na mba na mpaghara 60.
Gbado anya na ngwaahịa mma na mgbe-sales ọrụ, Ascend meriwo zuru ebe nile otuto na ntụkwasị obi nke mba ahịa. The ụlọ ọrụ nwere a ọkachamara engineer otu maka tupu ahịa oru alo, oru ngwọta na usoro nke ahịa, echichi, nyere na mgbe-sales ọrụ iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịzụta na-eji akụrụngwa na udo nke uche.
Anyị ọdọk ụlọ ọrụ iri ahịa ọrụ dị ka anyị isi ọrụ, anyị nwere keukwu tupu ahịa ọrụ na mgbe ahịa ọrụ.
Ọrụ mbu ahia
(1) Ndụmọdụ nke ihe nlere.
(2) Chepụta ma mepụta igwe dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị mkpa
(3) companylọ ọrụ ahụ anaghị akwụ ụgwọ maka onye ọrụ ya na ntanetị ọrụ ntanetị na saịtị maka ndị ọrụ iji hazie usoro na mmemme kacha mma.
(1) Dezie ndị ọkachamara ị ga-aga ebe ahụ iji duzie nwụnye ya
(2) Ọ bụrụ n ’igwe gị apụtaghị na akwụkwọ ikike, ị ga-aga ọfịs ofesi na Naịl zụta akụkụ ahụ mapụtara.
(3) usoro zuru ezu nke akụrụngwa arụnyere, 1-2 ndị ọrụ teknụzụ oge niile iji nọrọ n'efu iji nyere ndị ahịa aka ịmịpụta saịtị nke ọnwa 1, rue afọ ojuju onye ọrụ.
Kedu Ngwaahịa anyị na-enye?
1. ndinuak Equipment: n'agba crusher, mmetụta crusher, cone crusher, hama crusher, ala crusher, ezi crusher, compound crusher, nkume ndinuak mmepụta akara, wdg
2. Mobile ndinuak Plant: mobile agha crusher, mobile mmetụta crusher, mobile cone crusher, mobile vsi ájá eme osisi, wdg
3. Igwe ihe na-egweri ihe: igwe na-egwe ọka, igwe mkpanaka, igwe nri raymond, pan pan, wdg
4. Sand na Ajịrịja nkume Equipment: ájá onye, ​​vsi ájá eme osisi, ịwụ ụdị ájá washer, gburugburu ájá washer, wdg
5. Gold ore oru ngo na ngwọta: mobile gold trommel osisi, tank leaching, kpokọtara leaching, gold ore ndọda nkewa akara, CIL / CIP, wdg.
6. ralnweta nhazi Equipment: gburugburu classifier, gburugburu chute, n'ikwe table, jigging igwe, centrifugal gold concentrator, leaching tank, magnetik separator, flotation igwe, wdg